Hajimete no Gal Season 2 May wuu ka Dhaw yahay inta aad u malaynayso - Cradle View
Xaajimete no Gal Season 2
Leave a Comment on Hajimete no Gal Xiliga 2 May wuu ka Dhawyahay sidaad u malaynayso
Xaajimete no Gal waa mid caan ah Echi nooca Anime. Waxay caan noqotay markii dib loo sii daayay 2017. The Naadi si aad ah ayaa loo soo dhaweeyay wuxuuna ahaa taageere ay dad badan jeclaayeen. Maqaalkan, waxaan ku sharxi doonaa sababta Xaajimete no Gal Season 2 ay u badan tahay, iyo waqtiga la sii deyn doono.
The Manga Anime-kan wali waa la qorayaa mana muujinayso wax calaamad ah oo hoos u dhac ah, iyadoo daabacaadda manga ugu cusub la sii daayay horraanta 2021. Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonaa sababta tani u tahay muhiim ah iyo waxa ay uga dhigan tahay a Xaajimete no Gal Xilliga 2.
Xaajimete no Gal waa haraam nooca Anime oo lagu daray majaajillo iyo jacayl. Waxa kale oo ay qaadataa qaar ka mid ah codadka macaan sidoo kale. Dabeecadda (ka soo horjeeda), Yame, aad bay u soo dhaweeyeen taageerayaashu waxaana hubaal ah inay sii waday taxanaha ka hor meeshii loogu talagalay in la aado. Junichi jilaa ugu weyn waa nooc ka mid ah kuwa khasaaray oo aan la dareemin gabi ahaanba, laakiin gabdhaha dugsiga.
Yame waxaa cadaadis saaray arday ka weyn.
Taasi waa ilaa ay saaxiibbadii u dejiyeen si uu u waydiiyo Yame, iyada oo kaadhka gelisa sanduuqeeda iyada oo aan fasax laga haysan. Isaga oo aan is ogayn, Yame wuxuu jecel yahay isaga markuu u qirto oo uu dhab ahaantii aqbalo inuu la baxo isaga.
Daqiiqadan waa la xoojiyay, goorma Yame ka dib waxa uu ugu bishaareynayaa dhamaan fasalka in labadooda ay hadda is shukaansanayaan.
Tani waxay keenaysaa khalkhal aad u weyn oo fasalka dhexdiisa ah qof walbana wuu yaabay oo ku wareeray in tani run tahay! Yame waa gabadh aad u qurux badan oo qurux badan, sidaa darteed waxa loo arkaa mid aad u xun inay la baxdo Junichi marka la eego heerka dugsigiisa sare ee muuqda.
Dhamaadkii Xaajimete no Gal
Hadda dhamaadkii Xaajimete no Gal ahaa quruxsan gunaanad, leh Yame iyo Junichi wada dhamaata. Sidoo kale waa nooc ka mid ah dhammaadka farxadda leh. Ma aha sida Rabitaanka xumaanta halkaas oo aakhirka aad u niyad jabsan oo labada qof ee ugu waaweyni aanay helin waxay rabaan. Labada jilaa ee ugu muhiimsan waxay heleen waxay rabaan.
Tani waxa laga yaabaa inaanay calaamad fiican u ahayn qaar ka mid ah Naadi taageerayaasha sida ay la micno noqon kartaa in Naadi laguma sii wadi doono in ka badan sidii hore. Si kastaba ha ahaatee, tani ma dhici karto sababo badan dartood.
Yame Yukana iyo Junichi Hashiba
Xaalka Hajimete no Gal Manga
Sida 26th October 2021, waxaa jiray 13 mugga oo ka mid ah Manga qoran. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in kaliya 5 ka mid ah Manga buuga Hajimete no Gal lama habbayn. Waxaad ka arki kartaa sawirka hoose in ay jiraan tiro badan oo manga ah Xaajimete no Gal taas oo la daabacay. Marka tani miyay taasi ka dhigan tahay Xaajimete no Gal heli doona xilli 2?
The Magna Mugga la wareegay waa mugga manga-ga oo asalkiisu yahay Anime Hajimete no Gal waa la abuuray oo la waafajiyay. Sida aad arki karto waxaa weli jira 7 qaybood oo dheeraad ah Manga in la waafajiyo. Sidoo kale tan waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan ku daro in Manga wali waa socotaa. Weli ma dhammaan mana muujin wax calaamad ah oo ay sidaas samaynayso.
Hajimete no Gal Season ma heli doontaa xilli 2?
Xaajimete no Gal wuxuu ahaa Anime aad loo jecel yahay oo aan nafteyda aad uga helay. Xaajimete no Gal waxay heleen gaadiid markii ay soo baxday tanina way sii weynaatay oo way sii weynaatay.
Jilaagii ugu weynaa ayaa ahaa mid la jeclaa, ficilka adeegga Harem iyo Fan si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay iyo ka soo horjeeday (inta badan ma jiraan dad ka soo horjeeda taxanaha) Yukana wuxuu la dhacay ku dhawaad ​​qof kasta oo daawaday bandhigga. Sidii aan horay u sheegnay, Anime-gu wuxuu la qabsaday oo keliya 5 mugga oo ka mid ah Manga, oo leh OVA gaar ah oo sidoo kale la sii daayo.
Markaa iyadoo 7 mujallad weli la isku hagaajinayo, iyo kuwa Manga weli socda oo aan muujinayn wax calaamad ah hoos u dhac, waxay u muuqataa in la hubo in xilli 2 ee Xaajimete no Gal waa hubaal in saf loogu jiro wax soo saarka. Ama by shirkadda asalka ah wax soo saarka Jōtaró Ishigami Ichigo Yamada ama shirkad kale oo wax soo saar leh oo diyaar u ah inay qaadato doorka.
In kasta oo ay muddo ka soo wareegtay qaybtii u dambaysay ee Xaajimete no Gal la sii daayay, dhab ahaantii macnaheedu maaha in Naadi lama sii wadi doono. Hoos waxaa ah 4 sababood oo waaweyn oo sababta Xaajimete no Gal waa inay helaan ilbiriqsi:
Wax badan baa jiray Naadi kuwaas oo muddo dheer hakad ku jiray. Kaliya inaad soo noqoto mar labaad nasashada ka dib. Lagoon Madoow iyo Panic Full Full Panic waa tusaale fiican.
Anime-ku wuxuu hagaajiyay 5 mugga Manga, iyadoo ay weli jiraan 7 qaybood oo kale oo la isku hagaajinayo.
Xitaa haddii dhammaan Xaajimete no Gal Manga waa la daboolay, wali way qoran tahay ilaa maantadan la joogo.
buunbuuninta Xaajimete no Gal ma jiraan iyo rabitaanka xilli 2 waa mid aad u muuqda, xilli labaad waa fikrad fiican.
Sababahan dartood, waxaan ku soo koobeynaa in xilli ciyaareedkii labaad ee Xaajimete no Gal waa mid macquul ah oo gebi ahaanba suurtagal ah. Dhammaan qaybaha ugu muhiimsan ee xilli kale oo la abuurayo ayaa jira, oo leh rajo, waa inaan aragnaa xilli labaad!
Goorma ayaa Hajimete la sii deyn doonin Gal Season 2?
CV-gu waxa uu ku qiyaasay in wax soo saarka xilli 2aad ee Xaajimete no Gal bilaabmi doona hal mar dhawr qaybood oo kale Manga ayaa la waafajiyay. Ugu yaraan 1 ama 2. Kuwani waa tirada hadhay ee u baahan inay noqdaan. Looma baahna in la waafajiyo dhammaan 7-da, waxay ku bilaabi karaan 5 qaybood.
Haddaba, maadaama 7 ka mid ah 5-ta loo baahan yahay la qoray, markaas waa xilliga xilliga 2-aad ee Xaajimete no Gal aad bay u dhowdahay. Iyada oo in ka badan oo ku filan loo qoro in lagu habeeyo shirkadda wax soo saarka, waxay u muuqataa hubaal in Xilliga 2 uu sii deyn doono agagaarka 2022. Waxaa laga yaabaa xitaa December, maadaama taasi tahay markii OVA la sii daayay.
Waxaan ku qiyaasnay ​​taas Xaajimete no Gal xilli 2 ayaa la sii deyn doonaa waqtigaan ama inta lagu jiro 2022. Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani uu wax weyn idiin taray, wax kasta oo aanu idiin sheegnayba waa xaqiiqo run ah. Waxaan sidoo kale aaminsanahay in gabagabadayagu ay yihiin kuwo waaqici ah oo ku saleysan. Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani uu kuu anfacay sidii la rabay. Fadlan ha iloobin inaad maalin wanaagsan leedahay, share, comment, iyo like this article.
Iibso badeecada Muuqaalka Cradle si ay u taageerto qorayaasha boggaga
Gelitaan Hore Muuqaalka Jilaaga Junichi Hashiba
Gelitaanka Xiga Shiinaha ayaa soo sheegay kiiskii ugu horreeyay ee aadanaha ee hargabka shimbiraha ee H10N3